धेरै तातो पानी पिउनु पनि हुन सक्छ हारि`का`रक, निम्त्या`उन सक्छ यस्ता सम`स्या ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lifestyle/ Health/धेरै तातो पानी पिउनु पनि हुन सक्छ हारि`का`रक, निम्त्या`उन सक्छ यस्ता सम`स्या !
हामीलाई तातो पानीका फाइदाहरूको बारेमा थाहा छ। हामी मध्ये धेरै बिहान तातो पानी पिउने गर्छौं। जसरी तातो पानी पिउँदा धेरै फाइदाहरू हुन्छन्, त्यसरी नै यसले स्वास्थ्यलाई हानी गर्न पनि सक्छ। तातो पानी पिउनाले तौल घटाउनका लागि मद्द`त गर्नुका साथै प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनको लागि पनि लाभदायक हुन्छ।
तर धेरै तातो पानी पिउँदा पनि तपाईंको स्वास्थ्य`लाई हानी गर्न सक्छ। त्यसो भए, जान्नु`होस् तातो पानीको फाइदा र नोक्सानको बारेमा…
मिर्गौलाले शरीरबाट विषा`क्त पदार्थ निकाल्ने काम गर्दछ। तर धेरै तातो पानी पिउँदा मिर्गौलालाई असर गर्दछ, किनभने मिर्गौलामा दबाब पर्छ। धेरै तातो पानी पिउँदा तपाईंको मस्तिष्कको नसहरूमा पनि नकारा`त्मक असर पर्न सक्छ।
टाउको दुख्ने समस्या हुनसक्छ
अत्याधिक मात्रामा तातो पानीको सेवनले रगत र कोषहरूमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। पानीको धेरै अधिक खपतले रगतमा इलेक्ट्रोलाइट्सलाई पातलो पार्न सक्छ। यसले दिमाग कोषहरू सुन्निन सक्छ। जसले टाउको दु`ख्ने समस्या निम्त्या`उन सक्छ।
तातो पानी तपा`ईंको छाला`को लागि धेरै फाइदा`जनक छ। तातो पानी पिउँदा छाला स्वस्थ र चमकदार रहन्छ। यो सुक्खा छालाका लागि धेरै लाभ`दायक छ। यसले छाला स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ र सुन्दर चमक दिन्छ।
वजन कम गर्न
यदि तपाईं तौल घटाउन चाहनुहुन्छ भने नियमित रूपमा खाली पेट तातो पानी पिउनुहोस्। किनभने यसो गर्दा शरीरमा विषाक्त पदार्थ बाहिर आउँदछन्। त्यस्तै, तातो पानी पिउँदा शरीरमा भण्डारित बोसो कम हुन्छ, साथै रगत शुद्धि`करण पनि हुन्छ।
बहुउपयोगी पुदिनाका २५ फाइदा !!